Ibi ndu ndi ozo - Afrikhepri Fondation
sunday, Jenụwarị 24, 2021
Welcome AKWỤKWỌ NKE GROBLI NDỤMỌDỤ
Conye nyocha nke mmetụta anyị, nke ọzọ bụ ihe na-akpalite ọchịchọ anyị, onye na-ekpughe enweghị afọ ojuju anyị, mkpali na-akpali akpali nke ọgụgụ isi anyị, ihe arụ mere anyị ji abịaghachi na ndụ anyị maara mgbe anyị furu efu nke ukwuu na n'echiche.
Ọ na-anọchite anya windo a wee bilie na anyị ga-eji aka weghachite onwe anyị na ezigbo ụgbọelu nke usoro dị adị nke anyị bi n'ime ya, nke nwere ụdị di na nwunye nwere nkwarụ na ihe niile.
Ntughari, mkpali, ihu ocha, ochichiri, obi uto, onwu ma obu ha anaghi emegide ya, kama obu ihe di otua site na nmekorita kacha zuo oke?
So eyi mma yenhu sɛ yɛn som adwuma no som bo ma me?
N’ịbụ ndị eziokwu ahụ bụ na ọ nwere ike ịghọ ihe ịsụ ngọngọ na nkume mkparị na-atụ ụjọ, anyị kpọchiri onwe anyị n’akụkụ nkewapụ iche, anyị na-ezo mmetụta anyị n’ime ụlọ elu ọdụ ma ọ bụ na anyị wuru ihe mgbochi obi na-enweghị atụ. odika enweghi ike igbochi ya, ma ogagh adi nfe kari ayi igbochi echiche ayi ime njem gabigara ohere na oge ma weputa nkpuru obi.
Ihe omuma nke anyi bu ihe di mkpa nke omuma.
Ọ bụ ezie na ìgwè mkpụrụ obi anyị nwere ntụpọ na ntụpọ gbara ọchịchịrị na ihu ya mara mma nke nwere njehie, ọ bụghị dregs ahụ nọ na ala nke akpa ahụ?
Ncheta nke ndị dị iche iche na-anọgide n'akụkọ nke ụwa dịka a na-atụkwasị ya ruo mgbe ebighị ebi n'elu efere ndị a na-apụghị ịgbanwe agbanwe.
Fọdụ ga-anwa ịgha ụgha ya wee gbalịa ịdegharị akụkọ ihe mere eme nke ndị nna nna anyị na palimpsests mana ha ga-abịarute megide ngagharị nke oge nke ga-ekpughere anya nke ụwa aghụghọ ha ma rie ihu ọchị a n'ihi na eziokwu enweghị nsọtụ na wdg. ọ bụ ya ga-agbara ụmụ nwoke àmà n’oge kwesịrị ekwesị.
Mgbe echiche dị iche iche malitere, mgbe ọhụụ mmadụ ga-etolite n'ụzọ zuru ezu ma bụrụ ezi ala iji nweta mkpụrụ nke eziokwu mgbe ahụ ka a ga-ekpughe ihe nile, eziokwu ahụ ga-emeri ụgha.
Mgbe ụkwụ nke ọnwụ nwụsịrị nke ikpeazụ ya na ndị a dọtara n'agha n'oge gara aga ghọrọ ndị eze na ndị na-emegbu ha na-anọchi ha dị ka ndị nwụrụ n'ihi okwukwe na njedebe ikpeazụ nke karmic, mgbe ahụ, iwu nke Balance ga-eme ka nkwekọrịta n'etiti mba dị iche iche.
A gakwaghị enwe ajụjụ ọ bụla gbasara enweghị nha anya n'etiti agbụrụ, n'etiti mba na ndị mmadụ n'otu n'otu n'ihi na anyị ga-aghọta na anyị niile sitere n'otu mkpa, na anyị nwere otu uche na otu anyị ga-esi keta otu nketa.
Verygba ohu, ịchị mba, usoro mkpo, na ụdị enweghị oke ọ bụla ga-akwụsị ma ọdịiche nke ọdịbendị, agbụrụ, asụsụ, okpukpe ma ọ bụ ọbụlagodi echiche ga-abụ nnabata na mgbanwe nke mmadụ.
Oge na-abịa mgbe ndị kwabatara, ndị na-apụ apụ, ndị e mere ka ha jee biri n'ala ọzọ, ụmụ mgbei, ihe nsị agaghị agaghachi azụ n'ọnụ ụzọ ámá ma ọ bụ ọbụna ndị eleda anya n'ihi esemokwu ha.
N'ihi na onye bịara abịa ahụ ga-abụ onye ahụ, na mkparịta ụka kwa ụbọchị nke ịdị adị ya, amụtaghị ịmara onwe ya.
Site na Matthieu Grobli
Atiya AKWỤKWỌ NKE GROBLI NDỤMỌDỤ
Lelee Kirikou na Anụ ọhịa (2005)
Ọdịdị nke depigmentation nke akpụkpọ ahụ na Black Africa
Nikola Tesla, onye echefuru echefu bụ onye mepụtara ike n'efu
Soldiersmụ nwanyị ndị agha nke Dahomey - Comic strip (PDF)